स्वास्थ्य सामग्री बाँड्दै पानान्चे गौरवशाली बाल क्लब – Radio Roshi
स्वास्थ्य सामग्री बाँड्दै पानान्चे गौरवशाली बाल क्लब
in रोशी खबर / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	April 27, 2020
अशोक बुद्ध लामा–बैशाख १५,
काभ्रे जिल्लाको रोशी गा.पा वडा नं. ९ पानान्चे गाउँमा रहेको श्री पानान्चे गौरवशाली बाल क्लबले गाउँमा विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेको छ । बिश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा जोखिम कम गर्नुको लागि ५० घर परिवारलाई उक्त स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरेको हो ।
क्लबले ३ सय भन्दा वढि मानिसलाई माक्स तथा सेनिटाईजर वितरण गरेका थिए । संस्थका संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिब कृष्ण राना मगर र राम चन्द्र यस्माली मगरको संयुक्त पहलमा उक्त सामाग्री वितरण गरिएको क्लबका अध्यक्ष सौगत राना मगरले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष मगरको नेतृत्वमा र स्थानिय समाजसेबि गणेश ब. यस्माली मगर लगायत सम्पूर्ण बाल क्लब परिवारको उपस्थितिमा घर घरमा गएर माक्स र सेनिटाइजर वितरण गरि जनचेतना समेत दिएको अध्यक्ष मगरले बताए ।